ဆယ်​ကျော်သက်နှင့် ဝက်ခြံပြဿနာ | OnDoctor
လူပျို၊အပျိုဖြစ်စအချိန် ဆယ်​ကျော်သက်အရွယ်​ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကြုံ​တွေ့ရ​လေ့ရှိတာက​တော့ ဝက်ခြံ​ပေါက်ခြင်းပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်​ကျော်သက်များရဲ့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း​လောက်မှာ ဝက်ခြံထွက်ခြင်းအ​နေအထားဖြစ်​လေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်​တော့ ဝက်ခြံတွေဟာ ​ချွေး​ပေါက်များပိတ်ရာမှထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ခြံ​ကို မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊​ ကျော၊ ရင်ဘက်နှင့် ပခုံးတွေမှာ​ တွေ့ရ​လေ့ရှိပါတယ်။ အဖြူအဆံနှင့် ဝက်ခြံ၊ အမဲအဆံနှင့် ဆားဝက်ခြံ၊ ဝက်ခြံပုန်း၊ ဆင်ဝက်ခြံ စသဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးထွက်လာ​လေ့ရှိပါတယ်။
ဝက်ခြံပြသနာဟာ ကျန်းမာ​ရေးအတွက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်​စေတဲ့ပြဿနာ တစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် တစ်သက်တာ​ပျောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ အမာရွတ်​များကျန်​စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုလည်း ထိခိုက်​စေပါတယ်။
Q. ဘာ​ကြောင့် ဝက်ခြံထွက်ရတာလဲ?
ဝက်ခြံအ​ကြောင်းမ​ပြောခင် အ​ရေပြားအလုပ်လုပ်ပုံအ​ကြောင်း​​လေး အရင်ဆုံး​​ပြောလိုက်ရအောင်။ လူသားတွေရဲ့ အ​ရေပြားမှာ ​ချွေး​ပေါက်လို့​ခေါ်ကြတဲ့ အဆီဂလန်း​တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လူပျို၊ အပျို​ဖော်ဝင်တဲ့အခါ androgenလို့​ခေါ်တဲ့ ​ကျား​ဟော်မုန်းဓါတ်ဟာ အရင်ကထက်ပိုများလာတဲ့အခါ အဆီပိုထွက်လာပြီး ​ချွေး​ပေါက်များကို ပိတ်​စေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဆီပိုထွက်လာခြင်းဟာ Cutibacteriumacnesလို့​ခေါ်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယားကိုပို​ပေါက်​စေပါတယ်။ ပိတ်​နေ​သော​ချွေး​ပေါက်​တွေဟာ ဘတ်တီးရီးယားပိုများဝင်တဲ့အခါ ဝက်ခြံများထွက်လာပါ​တော့တယ်။ ၎င်းဘတ်တီးရီးယာပိုးများဟာ ​ချွေး​ပေါက်အတွင်းဆုံးအပိုင်းအထိ​ရောက်သွားသောအခါ ဆင်ဝက်ခြံအ​နေနဲ့ ထွက်လာပါ​တော့တယ်။ နှာ​ခေါင်းတစ်ဝိုက်​တွေ့ရ​သော အမဲအဆံနှင့် ဆားဝက်ခြံအမျိုးအစားက​တော့ အ​ရေပြား​​အောက်ရှိ​ချွေး​ပေါက်ပိတ်​သော်လည်း ​ချွေး​ပေါက်အဝဟာပွင့်​နေဆဲဖြစ်ပြီး အပြင်​လေဖြင့်oxidationဖြစ်ရာမှ အမဲအဆံ​လေးများ(ဆားဝက်ခြံများ)အ​နေနှင့် ​တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Q. ဘာ​ကြောင့်တစ်ချို့လူ​တွေဟာ ပိုပြီးဝက်ခြံထွက်လွယ်ရတာလဲ?
ဒီ​မေးခွန်းအတွက် တိကျ​သေချာတဲ့ အ​ဖြေတစ်ခုမရှိပါဘူး။ဖြစ်နိုင်​ခြေရှိတာများက​တော့
အဓိကအားဖြင့် androgenလို့​ခေါ်တဲ့ ကျား​ဟော်မုန်းဓါတ်​ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Androgen​ဟော်မုန်းဓါတ်ဟာ လူပျို​ဖော် အပျို​ဖော်ဝင်လာသည်နှင့် ​ယောကျ်ားလေးတွင်သာမက မိန်းခ​လေးများတွင်ပါ မြင့်မားလာ​လေ့ရှိပါတယ်။၎င်း​ဟော်မုန်းဓါတ်ဟာ ​ချွေး​ပေါက်များကိုကျယ်​စေပြီး အဆီများကို ပိုထုတ်​ပေးခြင်းဖြင့် ​ချွေး​ပေါက်များပိတ်ရာမှ ဝက်ခြံများထွက်​စေခြင်းကို​ ဖြစ်​ပေါ်​စေပါတယ်။
ဆယ်​ကျော်သက်အရွယ်များလူပျိုအပျိုဖြစ်စတွင် ​androgen​ဟော်မုန်းဓါတ် မငြိမ်ဘဲ မြင့်တက်နိုင်သကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်​ဆောင်စဉ် နှင့် ကိုယ်ဝန်တား​ဆေးများဖြတ်လိုက်သည့်အခါမျိုး​တွင်လည်း ကြုံ​တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံဟာမျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သင့်မိဘများဟာ ဝက်ခြံထွက်တတ်သူများဆိုလျှင် သင်တို့တွင်လည်း မျိုးရိုးလိုက်ပြီးဝက်ခြံပြသနာကြုံနိုင်​ချေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဥပမာ-အတက်ကျ​ဆေးများ၊Lithium နှင့် prednisolone
စေးကပ်​သော အလှပြင်ပစ္စည်းများဟာ ​ချွေး​ပေါက်များကိုပိတ်​စေတဲ့အတွက် ဝက်ခြံထွက်​စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မိတ်ကပ်​ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ​ရေဓါတ်ကို အ​ခြေပြုပြီးပြုလုပ်ထား​သောမိတ်ကပ်​တွေဟာ အဆီဓါတ်ကိုအ​​ခြေပြုပြီးပြုလုပ်ထား​သောမိတ်ကပ်​တွေထက် ဝက်ခြံထွက်​စေမှု နည်း​စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Q. ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးဝါး​စေ​သော အရာ​တွေက ဘာ​တွေလဲ?
၁) ဝက်ခြံများကို ညှစ်ခြင်း/ကလိခြင်း
၂) ဝက်ခြံ​ပေါက်​နေ​သော​နေရာများကို ပွတ်ခြင်း/ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း scrubလုပ်ခြင်း နှင့် သုတ်ခြင်း
၃) စက်ဘီးစီးဦးထုပ်၊​ကျောပိုးအိတ် ၊အင်းကျီ​ကော်လာကြပ်ကြပ်များဖြင့် ဝက်ခြံ​​ပေါက်ရာ​နေရာများကို ဖိမိ​နေခြင်း
၄) ဟော်မုန်း​ပြောင်းလဲမှုများ​သော ရာသီမလာခင် ၂ရက်မှ ၇ရက်အတွင်းအချိန်များ
-လူပျို​ဖော် အပျို​ဖော်ဝင်ချိန် ဆယ်​ကျော်သက်အရွယ်များ
၆) ဆံပင်ဆိုး​ဆေးများ နှင့် ဆီပြန်​နေ​သောဆံပင်များ
Q. ဝက်ခြံမထွက်​အောင် နှင့် ဝက်ခြံထွက်ခြင်းလျော့နည်း​အောင် ဘာ​တွေလုပ်လို့ရသလဲ?
၁) မျက်နှာကို တရားလွန်​သစ်ခြင်း နှင့် ဆပ်ပြာအပြင်းစားများသုံးခြင်း​​ရှောင်ပါ။
၂) အလှအပ​ရေးရာSkin care များကိုဝယ်ယူသုံးစွဲသည့်အခါ ​ချွေး​ပေါက်များမပိတ်​စေ​သော Oil Free အဆီဓါတ်ကိုအ​ခြေမခံ​သော ထုတ်ကုန်များကိုသာ ​ရွေးချယ်သုံးစွဲပါ။
၃) ဝက်ခြံများကို ဆိတ်ခြင်း/​ဖောက်ခြင်း/ကလိခြင်းများ​ရှောင်ပါ။
၅) လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးမျိုးလုပ်ပြီး​ချွေးပြန်သွားသည့်အခါ ​ရေချိုး​ပေးပါ။
၆) အ​ရေပြားကိုပွတ်တိုက်မှုဖြစ်​စေ​သော၊ဖိအားသက်​ရောက်​စေ​သော အရာများကို​ရှောင်ပါ။
၇) စိတ်ဖိစီးမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းချုပ်​ဖြေ​လျှော့ပါ။
Q. ဝက်ခြံထွက်ပါက ကုသသင့်ပါသလား။
ဝက်ခြံ ပြဿနာ ကြုံ​တွေ့​နေရပါက နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနှင့် စနစ်တကျကုသဖို့ အကြံ​ပေးပါရ​စေ။
​စောလျင်စွာဝက်ခြံကုသခြင်းဟာ အမာရွတ်မကျန်အောင်အ​ကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်း နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်​သော​ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။